काठमाडौंमा भूत बनेर तर्साउनेको यसरी भो पर्दाफास, (भिडियो) सहित हेर्नुहोस – पुरा पढ्नुहोस्……
काठमाडौंमा भूत बनेर तर्साउनेको यसरी भो पर्दाफास, (भिडियो) सहित हेर्नुहोस
”भ्रम छर्न होइन वास्तविकता पत्ता लगाउन हामीले टिकाथलिको रिपोरटिंग गरेका हौ। अफवाह फैलायौ कि अफवाहको सप्रमाण समाधान गरयौ? फैसला तपाईंको हातमा। तर यो जरुरी थियो। समस्या आयो, देखाएर समाधान गर्‍यौ।हाम्रो रेपोर्टलाई तोडमोड गर्नेहरुको भिडियो अब कति हास्यास्पद होला। मेरो अनुरोध छ, अब त्यसता रिपोर्टहरु आफ्नो युट्युब च्यानलबाट हटाउनु होला। हाम्रो कार्यक्रममा हामीले के भनेका थियौ त्यो सधै हेर्न मिल्छ। न मेट्नु पर्नेछ न हटाउनु पर्ने छ। यस पछीपनि आलोचनाको लायक नै छु भने स्विकार गर्नेछु। पाठ सिकेको सम्झी अबिचलित लागिरहने छु !” रविको फेसबुक पोस्ट
केही दिन अघि राजधानीमा भएको सामुहिक बलत्कारलाई लुकाउन, तोडमोड गर्न र पैसा फ्याँकेर शान्त गराउन खोजिएको समाचारले व्यापकता पाएको छ ।
एउटी नारीको अस्मितालाई पैसामा मोल्ने, सौदाबाजी गर्ने, मिलापत्र गर्ने, ढाकछोप गर्ने मानिसहरु समाजका कलंक हुन् ।
यो घृणित सत्य र पिडादायी यथार्थबाट चोखिनका लागि यो घटनाका मतियारहरुले १ लाख पटक अमृतकुण्डमा नुहाएपनि शुद्ध हुन सक्दैन ।
जति जुनी जन्मेपनि पापको यो भारी बिसाउन सकिन्न कंलकको टिका मेटाउन सक्ने छैनन् । घटनाको विवरण आउने क्रममा बलत्कारमा संलग्न दोषीहरु विरुद्ध उठेका आवाज मात्र होइनन्, घटनालाई दबाउन मोलमलाई गर्ने सौदावाजहरुको विरुद्ध झन् ठुला आवाज उठाउन जरुरी छ ।
नाटकीय ढंगले पिडित युवतीको बयान फेरीयो । पिडित युवतीको चरित्रमा उल्टै प्रश्न खडा गर्न खोजियो । पैसावाला यौन पिपासुहरुको हिम्मत यति सम्म भयो कि बलात्कृत युवतीलाई सेक्सुवली एक्टिभ भएको रिपोर्ट समेत दिइयो ।
राजी खुशीमा ३ जनासँग सम्पर्क गरेको रिपोर्ट समेत प्रस्तुत भयो । हे पैसा तँ कति तागतीलो यो समाजमा ? हे पैसा तँ जो सँग छस् यो देशमा नियम, कानुन, प्रहरी, प्रसाशन, त्यसैको खल्ती भित्र पुग्ने रहेछ है ?
खबर त यस्तो आएको छ कि पैसामा कुरा मिलेपछि स्वय जन्म दिने आमाले पनि बोलीनन् रे । मलाई विश्वास छैन । नौ महिना कोखमा राखे र दश धारा दुध पिलाएर, दश नंग्रा खियाएर कयौं रात जाग्राम बसेर, जीन्दगीसँग सिँघौरी खेलेर, मुटुमा टाँसेको छोरीको बलत्कारको घटना गुपचुप राख्न आफ्नै आमाले मञ्जुरीनामा दिनु सक्छिन ?
मातृत्व यति कंलकित हुनै सक्दैन । यदि कथंकदाचित भै हाल्यो भने पनि त्यो कुनै प्रकारको दबाब विना संभव छैन ।
छोरीको बलत्कारको घटनामा पैसा बुझेर चुप लाग्ने आमा छिन् भनेर पत्याउने दिन कहिल्यै नआओस् । कुनै दबाबमा परेकी भए विन्ती गर्छु, हे आमा पैसाको त्यो बिटो अपराधीको मुखमा फालिदेउ त्यो पनि हप्ता दिनको व्याज सहित ।
आमा छोरीले यो निर्णय गरेको दिन बलत्कारीहरुको पराजय हुनेछ । कसले के भन्दा भनि डराएर लोकलाजले वा अन्य कुनै पनि कारणले आज चुप हुनु भो भने कुनै दिन पैसाको बिटो बोकेर बलत्कारीकाहरु खुल्ला सडकमा निस्कन्छन् ।
एक पटक लाजिम्पाट, पानीपोखरीमा रहेको हाम्रो कार्यालयमा तपाईलाई भेट्न मन छ, यर्थाथ जान्न मन छ र संलग्न बलत्कारीहरुलाई छाती ठोकेर टेलिभिजनमा देखाइदिन मन छ । ताकी नारी अस्मीता र नारीको इज्जतमा हात हाल्ने र पैसा फ्याकेर मिलापत्र गर्नेहरु यो धर्तीमा कहिल्यै नजन्मुन् ।
छोरीलाई लिएर तपाई हाम्रो कार्याल्य आउने दिन कुरेर बस्ने छांै । हत्यारा, बलत्कारी, भष्ट्रचारी, केटी बेच्ने दलालहरु खुल्ला रुपमा हिडेको सुहाएन ।
Posted in भिडियो, रोचक
Prevचर्को नाराबाजीका साथ झगडा पर्‍यो भुत घर भनिने टिकाथलिमा ! रविलाई फसाउने रणनीति भन्दै (भिडियो सहित )
Nextत्यो कालो १० बर्से जनयुद्द को दरलाग्दो भिडियो ,,
आजको राशिफलः बि.स. २०७५ साल कार्तिक २६ गते सोमबार इश्वी सन् २०१८ नोबेम्वर १२ तारीख
अरबी गायक रफीले गाए नारायण गोपालको गीत :: पुरा हेर्नुस तपाई दंग पर्नुहुनेछ पुरा हेर्नुहोस (भिडियो सहित )
आजको नेपाल आईडलको नयाँ एपिसोड-हेर्नुहोस (भिडीयो सहित)
कोरोना संक्र’मित बढ्दै गएपछि आज राति १२ बजेबाट बिराटनगरमा १४ दिन पुनः लक’डाउन
आज उल्का वर्षा,यो समयमा नेपाली आकाशमा यसरी हेर्न सकिन्छ
अनुहारमा आएको कालो पोतो छुट,कारा पाउन अप, नाउनु होस् यी उपाय (भिडियो सहित)
आज बढ्यो अमेरिकि डलर सहित यी विदेशी मुद्राको भाउ..